Maxay Ilaahay Sharciyadiisu Inoo Taraan? | War Wanaagsan
Maxay Ilaahay Sharciyadiisu Inoo Taraan?
1. Maxaan talo ugu baahan nahay?
Sidee bay rumaha Kitaabka Quduuska ah inagu dhaqaajiyaan inaynu nolosheenna khatar gelin?—SABUURRADII 36:9.
Abuureheenna wuu inaga xigmad badan yahay. Sida Aabbe jacayl badan buu ina daneeyaa. Ulajeeddadiisu may ahayn inaan dad Ilaahay ka madaxbannaan noqonno. (Yeremyaah 10:23) Siduu ilmo yar ugu baahan yahay xannaanada iyo tababbarka waalidkiisa baynu u baahan nahay tilmaanta Ilaahay. (Ishacyaah 48:17, 18) Sharciyada Kitaabka Quduuska ah ku yaal tilmaantay ina siiyaan waa hibo Ilaah ka timid.—Akhri 2 Timoteyos 3:16.
Yehowah sharciyadiisu waxay ina baraan sidaan nolol fiican u heli karno imminka. Waxayna ina tusaan sidaan mustaqbalkeenna u heli karno abaalgud aan dhammaad lahayn. Mar haddii uu Ilaahay ina abuuray waxaa xaq ah inaan tilmaantiisa raacno si mahadnaqan.—Akhri Sabuurradii 19:7, 11; Muujintii 4:11.
2. Sidee buu Erayga Ilaahay tilmaan inoo siiyaa?
Rumo Kitaabka Quduuska ah ku qoran baa ina tusa wuxuu Ilaahay rabo inaan sameyno markaan la kulanno xaalado kala duwan. Laakiinse amarradiisa waxay ku saabsanaan karaan xaalado gaar ah. (Sharciga Kunoqoshadiisa 22:8) Waa inaan digtoonaanaa sidaan u fahamno waxay run Kitaabka Quduuska ah ku qoran inoo tilmaamayso inaan sameyno. (Maahmaahyadii 2:10-12) Matalan Kitaabka Quduuska ah wuxuu ina baraa inay noloshu tahay hibo uu Ilaahay ina siiyay. Runtaas waxay ina nabad gelisaa markaynu shaqada ama guriga joogno ama aan meel aadayno. Waayo waxay inaga caawisaa sidaynu khatar iskaga ilaalino.—Akhri Falimaha Rasuullada 17:28.
3. Labadee qaynuunood baa u muhimsan?
Ciise wuxuu ka hadlay laba qaynuun oo ugu weyn. Weliba qaynuunka ugu horreeya wuxuu inoo muujiyaa micnaha nolosha oo ah inaan Ilaah garanno oo jeclaanno oo daacadnimo ugu adeegno. Qaynuunkaas u horreeya waa inaan ka fiirsano markaynu goʼaan gaarayno. (Maahmaahyadii 3:6) Kuwa qaynuunkan ku nool xiriir gaar ah bay Ilaahay la yeeshaan oo farxad run ah bay haystaan welibana nolol weligeed ah bay heli doonaan.—Akhri Matayos 22:36-38.
Qaynuunka labaad wuxuu inoo tilmaamaa sidaan xiriir nabad ah aan dadka kale ula yeelan karno. (1 Korintos 13:4-7) Ku noolaanta qaynuunkaas labaad waxay ka dhigan tahay inaan siduu Ilaahay dadka ula dhaqmo ula dhaqanno.—Akhri Matayos 7:12; 22:39, 40.
4. Maxay sharciyada Ilaahay innaga inoo taraan?
Sharciyada Ilaahay waxay reeraha baraan siday xiriir jacayl badan ugu wada noolaadaan. (Kolosay 3:12-14) Weliba Erayga Ilaahay xaasaska wuxuu ku dhawraa tacliin barta inay kuwa is qabo aysan kala tagin.—Akhri Bilowgii 2:24.
Markaan sharciyada Ilaahay aynu isticmaalno waxay inoo daryeelaan maalkeenna iyo niyaddeenna. Matalan kuwa loo shaqeeyo waxay doortaan shaqaale Erayga Ilaahay ku nool waayo waxay yihiin kuwo dadaala oo daacad ah. (Maahmaahyadii 10:4, 26; Cibraaniyada 13:18) Waa inaan ku qanacsanaano waxaan u baahan nahay keliya. Waa inaan xiriirka Ilaahay aan la leenahay ka sii qiimeyno maal iyo xoolo adduunyo.—Akhri Matayos 6:24, 25, 33; 1 Timoteyos 6:8-10.
Markaan Ilaahay sharciyadiisa ku noolaanno caafimaadkeenna baan dhawri karnaa. (Maahmaahyadii 14:30; 22:24, 25) Matalan markaan xajino sharciyada Ilaahay oo inoo diida sakhraannimada waxay inaga badbaadiyaan cudurro khatar ah iyo shil. (Maahmaahyadii 23:20) Yehowah wuu oggol yahay inaan khamriga si qiyaasan u cabno. (Sabuurradii 104:15; 1 Korintos 6:10) Sharciyada Ilaahay way inoo fiican yihiin waayo ma dhawraan waxaan sameyno oo keliya laakiin weliba fekerkeennay dhawraan. (Sabuurradii 119:97-100) Hase ahaatee Kirishtaanka runta ah sababtay sharciyada Ilaahay u xushmeeyaan ma aha inay ka faaʼiidaystaan oo keliya laakiinse inay Yehowah sharfaan.—Akhri Matayos 5:14-16.
Booqasho Ka Codso Markhaatiyaasha Yehowah
Markhaatiyaasha Yehowah kala hadal mawduuc Kitaabi ah, ama tijaabi barnaamijkeenna dhigashada Kitaabka oo lacag laʼaanta ah.
Wadaag Wadaag Maxay Ilaahay Sharciyadiisu Inoo Taraan?